Saturday September 14, 2019 - 13:42:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulka xarameynka ayaa sheegaya in duqeyn ba'an lagu qaaday illaa laba xarumood oo shirkadda shidaalka ARAMCO ay ku lahayd deegaanno dhaca duleeedka magaalada caasimadda ah ee Riyaad.
Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa xaqiijisay in ciidamadeeda ammaanka ee qaabilsan ilaalinta goobaha naftada ay ku guuleysteen in ay dambiyaan dab ka kacay laba macmal oo ah goobo lagu sifeeyo naftada kadib markii ay duqeymo kala kulmeen diyaarado drone ah.
Telefeshinka ku hadla Afka dowladda Sacuudiga aya soo bandhigay muuqaal kooban oo muujinaya ciidamada oo daminaya goobaha dabku ka kacay balse muuqaallo Video ah oo baraha bulshada lagu faafiyay ayaa muujinaya gubasho daran oo gaartay xarumaha labeegsaday.
Qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacayay xarumaha shidaalka sifeeya ee duqeynta kala kulmay Xuthiyiinta, deegaanka Buqayq oo 150KM dhanka bari uga beegan magaalada Riyaad ayay ka dhacday duqeynta hore waxaana halkaas kuyaal macmalka lagu sifeeyo shidaalka ee adduunka ugu weyn.
Duqenynta labaad waxaa lagu beegsaday mandiqad katirsan gobolka Darhaan oo qiyaastii 190 KM dhanka koonfur galbeed uga beegan magaalada Riyaad waxaana kuyaal macmalka 2-aad ee shidaalka sifeeya oo caalamka ugu weyn.
Afhayeen melleteri oo u hadlay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay 10 diyaaradood oo nuuca drone-ka ah ay ku beegsadeen labadan xarumood isagoo hanjbaad culus jeediyay.